Nhau - Yakanaka Effet Zvigadzirwa
Ichi chigadzirwa chinoshanda nekupisa mafuta, kunatsiridza kuwedzerwa kweropa, kuwedzera mitsipa kusununguka.
Camellia Sinensis Leaf wabvisa, Glycerin, Peg-40 Hydrogenated Castor Oiri, Peg-60 Hydrogenated Castor Oiri, Mentholum
Kuti uwane mhedzisiro, shandisa kanokwana kaviri pazuva seinotevera:
1.Tora bhati husiku kuti uwedzere kuwedzerwa kweropa uye kuwedzera kunwa.
2.Shandisa kirimu padumbu, maoko, makumbo, mhuru, musana, uye magaro pamberi pechinhu chero chipi zvacho chemuviri uine kana usina kuputira muviri. Nyorera huwandu hwakanaka hwekrimu uye kwiza muviri wako nenzira yakatenderedza zvese zviri kuita wachi uye anticlockwise kudzamara ganda rako ranyatsoritora, gadzira kirimu inononoka inoshanda mukati meganda remafuta. Kurudzira kuora kwemafuta maseru, mhanyisa kupisa kwemafuta, kuti uwane chinangwa chakanaka chekudzikisa huremu.
3.Avoid kuishambidza neshawa, bhati kana ziya-kubuda ziya kweinenge awa rimwe mushure mekushandisa.
Panguva imwechete panguva yekushandisa kwechigadzirwa zvakare usanyanya kudya, kutora mafuta akawandisa. Kunyangwe hwakanaka huremu hwekudzora zvigadzirwa, kana iwe ukasaterera kune chikafu kana usingadzora kudyiwa kwemacalorie. Izvo zvakare zvinotungamira kune kufutisa.
1.Pure 100% Organic Lip Kukanda
Hapana chinhu kunze kwemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvakagadzirwa patembiricha yakakwana kuchengetedza zviwanikwa zvakakosha muzvinhu zvinokupa ruzivo rwakatsetseka, runoshanda kwazvo remuromo nekunyorovesa.
Dual Purpose - Exfoliating & Moisturizing Lip Kuchengeta: Ichi chinoshamisa LIP SCRUB inoratidzira Organic, shuga panzvimbo yekemikari flavour. Iko kusanganisa kwakangwara kweOrganic, sitirobheri, bhiribheri, chokoreti, cucumber zvimedu zvinogadzira yakakwana miromo yekugadzirisa mhinduro yekubvisa yakaoma, yakaoma miromo UYE inosiya kumashure kweasilika isina hunyoro kunyorovesa mhedzisiro yemucheche miromo.
Utsinye Mahara: Miromo yedu yekukwesha haina kumbobvira yaedzwa pamhuka.
Runako Rine Muitiro Unofanira-Kuve: kufutisa miromo yako ndeye inofanirwa kuona kuti miromo yako yakatetepa, yakapfava uye yakapfava. Ita kuti miromo yako ive inoshuvira uye kutsvoda zvachose!
2.Kunyatso Kubudirira - Slimming Cream
Slimming cream ine zvainoita pakudzora mafuta, kunyanya kune avo vanozvitutumadza, chigadzirwa ichi chine mushandiso wakanaka kwazvo.
Iyo inogona kuve nemhedzisiro yakajeka mushure kweinopfuura mwedzi mumwe wekushandisa.
Kuenderera mberi kwekushandisa kwemwedzi yakati wandei kunogona kukupa iwo mhedzisiro mhedzisiro isingadzosere zvakawanda kana ukamira zvachose.
Kunyanya, iyi kirimu inononoka ine maitiro akanaka kwazvo pakuvandudza kwemakumbo ekuzvimba.
Asi kune vanhu vanoda kudzikira uremu nekukurumidza kana vane mafuta akawandisa, shandisa kamwe mangwanani uye kamwe manheru.
Kuchengetedza mhedzisiro yepamusoro zvinokurudzirwa kushandisa kwemwedzi 3-5 / gore.